မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ ပန်းဝင်ကြတော့မယ့် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးများအကြောင်း – Myanmar top news
မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ ပန်းဝင်ကြတော့မယ့် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးများအကြောင်း
ကိုဗဈကာကှယျဆေးတှမှော နောကျဆုံးပနျးဝငျလာနိုငျသူတှကေို တနျးစီကွညျ့ပါမယျ။ စုစုပေါငျး ကာကှယျဆေး (၁၁) တောငျမြိုးရှိပါတယျ။ပနျးဝငျပွီး တဈကမ်ဘာလုံးလကျခံဖို့ အောကျပါအဖှဲ့အစညျးတှထေဲက အနညျးဆုံးတဈဖှဲ့ရဲ့ အသိအမှတျပွုမှုကို လိုအပျပါတယျ။
အမရေိကနျက FDA ဥရောပသမဂ်ဂရဲ့ EMA ယူကနေိုငျငံရဲ့ MHRA WHO အဲ့လို အသိအမှတျပွုရဖို့က …
ကာကှယျဆေးရဲ့အန်တရာယျကငျးမှု၊ အာနိစငျထိရောကျမှုတို့အပွငျ၊ ထုတျသမြှအလုံးတိုငျးမှာ အရညျအသှေးတူညီဖို့၊ ထုတျလုပျရာမှာ သနျ့ရှငျးမှု (strict sterilization နဲ့ hygiene standards) တှေ လိုအပျပါတယျ။
နောကျဆုံး FDA ရဲ့အသိအမှတျပွုရဖို့တအားနီးကပျနတောက ….(၁) Pfizer/BioNTech – FDA တငျထားပွီးပွီ။ ဒီဇငျဘာလလယျမှာကနြိုငျတယျ။(၂) Moderna – FDA တငျတော့မယျ။ ဒီဇငျဘာလလယျမှာကနြိုငျတယျ။ သူတို့နှဈမြိုးက RNA နညျးပညာနဲ့ထုတျထားတာ။ Non-replicating viral-vector ကာကှယျဆေးမြိုးတှကေ (၄) မြိုးရှိတယျ။
(၃) Oxford/AstraZeneca – သူနဲ့မြိုးတူတှထေဲမှာ စိတျအခရြဆုံးနဲ့အန်တရာယျအကငျးဆုံး ကာကှယျဆေးဖွဈတယျ။ ခရဈစမတျမတိုငျခငျ EMA နဲ့ MHRA ကနြိုငျတယျ။ တတိယပနျးဝငျနိုငျတဲ့သူဖွဈတယျ။
(၄) Johnson & Johnson – တဈလုံးပဲထိုးဖို့လိုတဲ့အမြိုးက စကျတငျဘာလထဲမှာ Phase3စစမျးသပျထားတယျ။ သူလညျးပနျးဝငျကာနီးနပွေီ။ နှဈလုံးထိုးရတဲ့ နောကျတဈမြိုးကို နိုဝငျဘာလ ၁၆ ရကျနမှေ့ာစထားတယျ။ အဲ့ဒါကတော့ နောကျနှဈဆနျးထဲမှာမှ ပနျးဝငျမယျ။
(၅) တရုတျ CanSino က တရုတျမှာပထမဆုံး အစိုးရက စဈတပျသုံးအဖွဈခှငျ့ပွုပေးခဲ့တဲ့ ကုမ်ပဏီဖွဈတယျ။ တကယျလို့ အထကျပါအဖှဲ့အစညျးတဈခုခုက လကျခံနိုငျခဲ့ရငျ သူက နံပါတျ(၅)လောကျမှာ ပနျးဝငျလာမယျ။ CanSino ရဲ့ ကာကှယျဆေးဟာ ရိုးရိုးတုပျကှေးဗိုငျးရပျဈကိုသုံးထားလို့ အာနိသငျထိရောကျမှုကို #သံသယရှိနကွေတယျ။
(၆) ရုရှားရဲ့ Gamaleya က သူ့ဟာသူတော့ ၉၂% ထိရောကျတယျကွညောထားပမေယျ့ Phase3ရလဒျကို လူသိရှငျကွားသခြောခပြွဖို့လိုတယျ။ အဲ့လိုခပြွလို့ လကျခံနိုငျရငျတော့ နံပါတျ (၆) နရောမှာပနျးဝငျလာနိုငျတယျ။နောကျထပျ (၄) မြိုးက Inactivated virus ကာကှယျဆေးမြိုးတှဖွေဈတယျ။ Inactivated virus ဟာ ကာကှယျဆေးထုတျလုပျရေးအပိုငျးမှာ သသေခြောခြာကိုဂရုစိုကျဖို့လိုတယျ။
(၇) တရုတျ SinoVac ရဲ့ကာကှယျဆေးဟာ နောကျလထဲမှာ Phase3ရလဒျကိုထုတျပေးနိုငျမယျပွောနတေယျ။ တကယျလို့ အထကျပါအဖှဲ့အစညျးတဈခုခုက လကျခံနိုငျခဲ့ရငျ သူက နံပါတျ(၅)/(၆)/(၇) တဈနရောရာလောကျမှာ ပနျးဝငျလာမယျ။
(၈) (၉) Sinopham ရဲ့ကာကှယျဆေးကလညျး တရုတျမှာ လူတဈသနျးနီးပါးလောကျကိုထိုးပေးထားတယျကွားတယျ။ Phase3ရလဒျအပွညျ့အစုံမထှကျသေးပဲနဲ့ ခနြတော။ တကယျလို့ အထကျပါအဖှဲ့အစညျးတဈခုခုက လကျခံနိုငျခဲ့ရငျ သူက နံပါတျ(၅)/(၆)/(၇)/(၈) တဈနရောရာလောကျမှာ ပနျးဝငျလာမယျ။ Sinopham က Beijing Institute နဲ့ တဈမြိုးထုတျပွီးတော့ Wuhan Institute နဲ့လညျး တဈမြိုးထုတျကာ နှဈသီးစားဖို့လုပျထားတယျ။
(၁၀) Bharat Biotech က အိန်ဒိယကကာကှယျဆေးကလညျး Phase3စမျးသပျနပွေီမို့ နံပါတျ (၁၀) လောကျမှာ ပနျးဝငျလာနိုငျတယျ။ အိန်ဒိယရဲ့ ဂုဏျယူဖှယျကာကှယျဆေးတဈခုဖွဈလာနိုငျတယျ။
(၁၁) မြိုးမတူလို့နောကျဆုံးမှာရေးထားပမေယျ့ နံပါတျ (၄)/(၅) လောကျမှာပနျးဝငျလာနိုငျတာက Novavax ဆိုတဲ့ အမရေိကနျကုမ်ပဏီရဲ့ကာကှယျဆေး။ သူက စကျတငျဘာ ၂၃ ကတညျးက Phase3စတငျခဲ့တာဆိုတော့ ၂၀၂၁ နှဈဆနျးမှာ ပနျးဝငျနိုငျတယျ။ သူက Protein subunit ဆိုတဲ့ ပရိုတိနျးကိုအခွခေံတဲ့ကာကှယျဆေး။
အခုဆိုရငျ နောကျဆုံးအဆငျ့မှာ ပနျးဝငျဖို့ကပျနတေဲ့ ကာကှယျဆေး (၁၁) မြိုးတောငျရှိတယျဆိုတာ သိထားကွဖို့ တငျပွပေးလိုကျပါတယျ။ဒီကာကှယျဆေးတှနေဲ့အတူ အထိရောကျရောကျဆုံးကာကှယျဆေးတဈခုအဖွဈ #တှဲပွီးတဈနှဈလောကျကငျြ့သုံးနရေမှာက Mask တပျခွငျး၊ လကျကိုသသေခြောခြာဆေးခွငျးနဲ့ ခပျခှာခှာနခွေငျးတို့ဖွဈပါကွောငျး။
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေမှာ နောက်ဆုံးပန်းဝင်လာနိုင်သူတွေကို တန်းစီကြည့်ပါမယ်။ စုစုပေါင်း ကာကွယ်ဆေး (၁၁) တောင်မျိုးရှိပါတယ်။ပန်းဝင်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးလက်ခံဖို့ အောက်ပါအဖွဲ့အစည်းတွေထဲက အနည်းဆုံးတစ်ဖွဲ့ရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုကို လိုအပ်ပါတယ်။
အမေရိကန်က FDA ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ EMA ယူကေနိုင်ငံရဲ့ MHRA WHO အဲ့လို အသိအမှတ်ပြုရဖို့က …
ကာကွယ်ဆေးရဲ့အန္တရာယ်ကင်းမှု၊ အာနိစင်ထိရောက်မှုတို့အပြင်၊ ထုတ်သမျှအလုံးတိုင်းမှာ အရည်အသွေးတူညီဖို့၊ ထုတ်လုပ်ရာမှာ သန့်ရှင်းမှု (strict sterilization နဲ့ hygiene standards) တွေ လိုအပ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး FDA ရဲ့အသိအမှတ်ပြုရဖို့တအားနီးကပ်နေတာက ….(၁) Pfizer/BioNTech – FDA တင်ထားပြီးပြီ။ ဒီဇင်ဘာလလယ်မှာကျနိုင်တယ်။(၂) Moderna – FDA တင်တော့မယ်။ ဒီဇင်ဘာလလယ်မှာကျနိုင်တယ်။ သူတို့နှစ်မျိုးက RNA နည်းပညာနဲ့ထုတ်ထားတာ။ Non-replicating viral-vector ကာကွယ်ဆေးမျိုးတွေက (၄) မျိုးရှိတယ်။
(၃) Oxford/AstraZeneca – သူနဲ့မျိုးတူတွေထဲမှာ စိတ်အချရဆုံးနဲ့အန္တရာယ်အကင်းဆုံး ကာကွယ်ဆေးဖြစ်တယ်။ ခရစ်စမတ်မတိုင်ခင် EMA နဲ့ MHRA ကျနိုင်တယ်။ တတိယပန်းဝင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။
(၄) Johnson & Johnson – တစ်လုံးပဲထိုးဖို့လိုတဲ့အမျိုးက စက်တင်ဘာလထဲမှာ Phase3စစမ်းသပ်ထားတယ်။ သူလည်းပန်းဝင်ကာနီးနေပြီ။ နှစ်လုံးထိုးရတဲ့ နောက်တစ်မျိုးကို နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့မှာစထားတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ နောက်နှစ်ဆန်းထဲမှာမှ ပန်းဝင်မယ်။
(၅) တရုတ် CanSino က တရုတ်မှာပထမဆုံး အစိုးရက စစ်တပ်သုံးအဖြစ်ခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ အထက်ပါအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက လက်ခံနိုင်ခဲ့ရင် သူက နံပါတ်(၅)လောက်မှာ ပန်းဝင်လာမယ်။ CanSino ရဲ့ ကာကွယ်ဆေးဟာ ရိုးရိုးတုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ကိုသုံးထားလို့ အာနိသင်ထိရောက်မှုကို #သံသယရှိနေကြတယ်။
(၆) ရုရှားရဲ့ Gamaleya က သူ့ဟာသူတော့ ၉၂% ထိရောက်တယ်ကြေညာထားပေမယ့် Phase3ရလဒ်ကို လူသိရှင်ကြားသေချာချပြဖို့လိုတယ်။ အဲ့လိုချပြလို့ လက်ခံနိုင်ရင်တော့ နံပါတ် (၆) နေရာမှာပန်းဝင်လာနိုင်တယ်။နောက်ထပ် (၄) မျိုးက Inactivated virus ကာကွယ်ဆေးမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ Inactivated virus ဟာ ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရေးအပိုင်းမှာ သေသေချာချာကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။
(၇) တရုတ် SinoVac ရဲ့ကာကွယ်ဆေးဟာ နောက်လထဲမှာ Phase3ရလဒ်ကိုထုတ်ပေးနိုင်မယ်ပြောနေတယ်။ တကယ်လို့ အထက်ပါအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက လက်ခံနိုင်ခဲ့ရင် သူက နံပါတ်(၅)/(၆)/(၇) တစ်နေရာရာလောက်မှာ ပန်းဝင်လာမယ်။
(၈) (၉) Sinopham ရဲ့ကာကွယ်ဆေးကလည်း တရုတ်မှာ လူတစ်သန်းနီးပါးလောက်ကိုထိုးပေးထားတယ်ကြားတယ်။ Phase3ရလဒ်အပြည့်အစုံမထွက်သေးပဲနဲ့ ချနေတာ။ တကယ်လို့ အထက်ပါအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက လက်ခံနိုင်ခဲ့ရင် သူက နံပါတ်(၅)/(၆)/(၇)/(၈) တစ်နေရာရာလောက်မှာ ပန်းဝင်လာမယ်။ Sinopham က Beijing Institute နဲ့ တစ်မျိုးထုတ်ပြီးတော့ Wuhan Institute နဲ့လည်း တစ်မျိုးထုတ်ကာ နှစ်သီးစားဖို့လုပ်ထားတယ်။
(၁၀) Bharat Biotech က အိန္ဒိယကကာကွယ်ဆေးကလည်း Phase3စမ်းသပ်နေပြီမို့ နံပါတ် (၁၀) လောက်မှာ ပန်းဝင်လာနိုင်တယ်။ အိန္ဒိယရဲ့ ဂုဏ်ယူဖွယ်ကာကွယ်ဆေးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်။
(၁၁) မျိုးမတူလို့နောက်ဆုံးမှာရေးထားပေမယ့် နံပါတ် (၄)/(၅) လောက်မှာပန်းဝင်လာနိုင်တာက Novavax ဆိုတဲ့ အမေရိကန်ကုမ္ပဏီရဲ့ကာကွယ်ဆေး။ သူက စက်တင်ဘာ ၂၃ ကတည်းက Phase3စတင်ခဲ့တာဆိုတော့ ၂၀၂၁ နှစ်ဆန်းမှာ ပန်းဝင်နိုင်တယ်။ သူက Protein subunit ဆိုတဲ့ ပရိုတိန်းကိုအခြေခံတဲ့ကာကွယ်ဆေး။
အခုဆိုရင် နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ ပန်းဝင်ဖို့ကပ်နေတဲ့ ကာကွယ်ဆေး (၁၁) မျိုးတောင်ရှိတယ်ဆိုတာ သိထားကြဖို့ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့အတူ အထိရောက်ရောက်ဆုံးကာကွယ်ဆေးတစ်ခုအဖြစ် #တွဲပြီးတစ်နှစ်လောက်ကျင့်သုံးနေရမှာက Mask တပ်ခြင်း၊ လက်ကိုသေသေချာချာဆေးခြင်းနဲ့ ခပ်ခွာခွာနေခြင်းတို့ဖြစ်ပါကြောင်း။
← ကိုဗစ်ကာလထဲမှာ မြင်းခြံက ခိုးဖွင့်နေတဲ့ ကေတီဗီအနှိပ်ခန်းတွေကို ဝင်ဖမ်း၊ ဖောက်သည်များပါ ဖမ်းထား
အီတလီမှ ကိုဗစ် စဖြစ်သည်ဆိုသော အယူအဆကို တရုတ် ဝါဒဖြန့်နေ →